နတ်ကိုးကွယ်မူနှင့်ငါးပါးသီလ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » နတ်ကိုးကွယ်မူနှင့်ငါးပါးသီလ
Posted by Big Defender on Aug 14, 2011 in Buddhism, Creative Writing | 21 comments
ဗုဒ္ဒဘာသာ တစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီး ဆိုကတည်းက ယုံကြည်ကိုးကွယ်စရာ ငါးပါးပဲ ရှိသည်။ ယင်းတို့မှာ – ဘုရား၊ တရား ၊ သံဃာ၊ မိဘ၊
ဆရာသမား ဟူသော အနန္တော အနန္ဒငါးပါး ပင်ဖြစ်သည်။
ယခု ကိုးကွယ်နေသော နတ်များတွင် မြတ်စွာဘုရားကဲ့သို့ ဘုန်းတော် အနန္ဒ ဥာဏ်တော် အနန္ဒနှင့်ပြည် စုံပါဝင်သော
ကြည်ညိုဖွယ်ရာ အဆင်းရော ရှိပါလော့.? ဝေးပါသေးတယ် အရက်ပုလင်းကိုင်တဲ့ နတ်နဲ့ ဓါးကိုင်တဲ့ နတ်နဲ့ စုံတေတာပါပဲ။
မြတ်စွာဘုရား ၏ပုံတော်များတွင် မည်သည့် လက်နက်ကိုကိုင်ဆောင်ထားတာ တွေ့ဘူးပါသနည်း။ မြတ်စွာဘုရားဟာ မေတ္တာ လက်
နက်သာ ကိုင်ဆောင်ထားပါသည်။ မည်သည့်လက်နက်မှ ကိုင်ဆောင်ထားခြင်းမရှိပါဘူး။
တရားဆိုသည်မှာ လောကီ ၊ လောကုတ္တရာ အကျုိးအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး မြတ်စွာဘုရားဟော ကြားခဲ့သော သူတော်ကောင်းတရား
ကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါနတ်များတွင် ယခုဘ၀ အကျိုးသံသရာ ဘ၀အကျိုး အတွက် မျှော်ကိုးပြီး ဟောကြားခဲ့တာများရှိပါသလား။
ရှိတော့ ရှိတယ်။ ငါ မကြိုက်တဲ့ အ၀တ် မ၀တ်နဲ့ ငါမစားခိုင်းတဲ့ အစား မ စားနဲ့။ ငါဘယ်လို အုန်းသီး မကြိုက်ဘူး ၊ အရက် ပြိုင်သောက်မယ်
သံဃာဆိုသည်မှာ ယေဘုယျ အားဖြင့် မြတ်စွာဘုရားဟော ကြားခဲ့သော လောကီ အကျိုး၊ လောကုတ္တရာ အကျိုးအလိုငှာ ဟော
ပြောခဲ့ သော တရားတော်များကို စောင့်ရှောက် ရန်နှင့် ပြန်ပွားရန် အတွက် သိက္ခပုဒ် မြောက်မြားစွာကို စောင့်ထိန်းရသော အကျင့်သီလနှင့်
ပြည်စုံသော ပုဂ္ဂိုလ်များကို ခေါ်သည်။
ကဲ ………..ဒါဆို နတ်တွေရဲ့ တပည့် သာဝက ကြီးများက ဘယ်သူများပါလိမ့်။ သူတို့က လူတိုင်းရဲ့ အထင်သေးခြင်းကို ခံရတဲ့ မိန်း
မလျှာများ ဆိုတာ ငြင်းနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်။ အဆိုပါ မိန်းမလျှာများ က နတ်တွေရဲ့ သာသနာ တည်တံအောင် ကြိုးစားနေသူများဖြစ်သည်။
ဒါဆို သံဃာနဲ့ မိန်းမလျှာ ဘယ်သူ့ကို ယုံကြည်မလဲ?
မိဘ။ မိဘဆိုတာကတော့ သိကြတဲ့ အတိုင်းပါ ကျွန်တော်တို့ကို မွေးပြီး ပင်ပန်း ကြီးစွာ ရှာ ဖွေ ကျွေးမွေးတဲ့ အပြင် လူတစ်လုံး သူ
တစ်လုံး ဖြစ်အောင် ပညာတတ် တစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ပြုစုပြိုထောင် သူများ ဖြစ်ပါသည်။ အင်မတန်မှ ကျေးဇူးကြီးလှပါသည်။ ဒါဆို နတ်တွေက
တော့ ကျွန်တော်တို့ကို ကျွေးမွေးပြုစုခဲ့ပါသလား။ နတ်က ရှာဖွေကျွေးမွေးတာကို စားဖူးတဲ့ သူရှိရင် အဲဒီလူ ကအင်မတန်မှ ကံကောင်းတဲ့ သူဖြစ်မှာ
ဆရာဆိုတာကတော့ လောကမှာ သိသင့် သိထုိက်တဲ့ အတတ်ပညာများ၊ အသက်ရှင်နေ ထိုင်စဉ် မည်သူမဆို တန်းဖိုးရှိအောင် မည်သို့ နေ
ထိုင်ရသည်ကို သင်ကြား ပေးသော သူ ဆရာပင် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ နတ်များက လူ့လောကတွင် မည်သို့ တန်ဖိုးရှိအောင် နေထုိင်မည် ဟု သင်ကြားပေး
ခဲ့ဖူးပါသလား ဆို ဆုံးမဖူးပါသလား။?
ကျွန်တော် အတွက် လက်တွေ့ကျကျ ကောင်းကျုိးကိုဘာမှ မပေး ပဲနှင့် ဘာလို့များ ကိုးကွယ်နေကြရတာလဲ?
အမှန်တော့ လူတွေကို အမျှော်တရားနဲ့ အကြောက်တရား ကို ရိုက်သွင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ အမျှော်တရားဆိုသည်မှာ ပစ္စည်း ဥစ္စာ ၊ လာဘ်လာဘကို
ပေးမည်ဟု မက်လုံးပေးခြင်းနှင့် အကြောက်တရားဆိုသည်မှာ ငါ့က်ို မယုံကြည် မပသလျှင် ဘာလုပ်မည်ဟု ချိန်းခြောက်မူပင်ဖြစ်သည်။ ထိုတရား တို့သည်ပင်
လူသားတို့၏ ပွင့်လင်းသော စဉ်းစားချင့်ချိန်မူကို အဟန်အတား ဖြစ်စေသည်။
ချမ်းသာလျှင်နတ်မပြီးဖြစ်ပြီး ဒုက္ခရောက်လျှင် နတ်မကြိုက်တာ လုပ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည် ဟူသော ရိုးရှင်းသော လှည့်ဖြားမူသည်လူသားတို့၏ ကိုယ်ကို
ကိုယ့်ယုံကြည် မူကို ဖျက်ပြားစေသည်။
အမှန်မှာ ဆင်းရဲ ချမ်းသာဆိုသည်မှာ ကံကံ ၏ အကျိုးပင်တည်းမိမိ၏ ကံ ဥာဏ်၊ ၀ိရိယ နှင့်အချိန်အခါ ၊နေရာ၊ ဒေသ၊ ကံအကြောင်းတရားတိုက်ဆိုင်
လျှင်ဆင်းရဲ ချမ်းသာကို ခံစားရတာ ချည်းပင်ဖြစ်သည်။ ယခု ဘ၀နှင့် သံသရာ မှာ ချမ်းသာရေးအတွက် မြတ်စွာဘုရားပင် အာမမခံနိုင်ပေ။ လမ်းညွန့် ပေးနိုင်ယုံသာ
ပေးနိုင်သည်။ ကျန်တာ မိမိအပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ကိုယ်သာလျှင် ကိုယ်ဘ၀ရဲ့ပဲ့ကိုင်ရှင် ပဲဖြစ်သည်။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုသော် လူအများကိုးကွယ်သော နတ်များမှာ တကယ်ရှိ ခြင်း ရှိမည် မရှိရင်လည်းမရှိနိုင် ဟုတ်ခြင်းလည်းမည်။ မဟုတ်ခြင်းလည်း မဟုတ်
နိုင်ပေ။ (ဒါပေမယ်) နပ်များတော့ ရှိသည်။
လူထက်နပ်သော သူများဖို့ လူတွေက်ို လှည့်စား နိုင်သူများ ကိုခေါ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ထိုအပြင် နတ်ပွဲများ ပြုလုပ်မူကြောင့် ကုန်ကျ ငွေများကို အလွန်ပင် နှ
မျောမိသည်။ ထိုငွေများကို သာသနာ အတွက် အသုံးချလျှင်အင်မတန်မှ အကျိုးရှိ ယုံမက နောင်ဘ၀အတွက်လည်း အကျိုးတူရရှိမည်မှာ မလွဲမသွေပင် ဖြစ်သည်။
ဒါကတော့ ပထမတင်ထားတဲ့ အဆက်ဖြစ်ပါတယ်
၀င်ပြီးတော့ ဖတ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါပဲ
ပထမတင်ထားတာ တော့ ဘာမှ မရှိလို့ ဖတ်မရဘူးဗျ…. မ တစ်လုံးပဲတွေ့ပါတယ်…
သိသလောက်ပြောရရင် နတ်များသည်လည်း သာသနာပြုပါတယ် တဲ့…
ကိုးကွယ်စရာတော့မလိုပါဘူး လို့ တစ်ကယ့် နတ်ဝင်သည်ကြီးတွေက ပြောပြပေးပါတယ် ….
ကိုးကွယ် ပသ တဲ့သူတွေ ကတော့ အယူလွဲတာပဲလို့ ထင်ပါတယ်….။
ပထမ.တင်တဲ့”နတ်ကိုးကွယ်မူနှင့်ဗုဒ္ဒဘာသာ”..ကတော့ မ. တစ်လုံးပဲချိလို့ ..၀င်ပွားရင် (-) ပြခံရမှာချိုးရို့ .
မနည်းအောင့်ထားရဒယ်.. ..တဂျီးက အဲဒါပဲ ချောင်းနေတာကလား..
“ချမ်းသာလျှင်နတ်မပြီးဖြစ်ပြီး ဒုက္ခရောက်လျှင် နတ်မကြိုက်တာ လုပ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည် ဟူသော ရိုးရှင်းသော လှည့်ဖြားမူသည်လူသားတို့၏ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည် မူကို ဖျက်ပြားစေသည်။”
ဆိုတာလေး သိဖို့ ပါဘဲ..
မြတ်စွာဘုရားကိုမယုံကြည်၍မဟုတ်ပါ။ဘုရားနှင့်တရားကို အကြွင်းမဲ့ လက်ခံပါတယ်။ဒါပေမယ့် သံဃာနှင့်တူသော သံဃာ၊မိဘ တာဝန်ကျေပွန်သောမိဘ၊ဆရာ့ဝတ္တရားကျေပွန်သောဆရာကောင်း ၊အင်မတန်ရှားပါးလာတာ သတိပြုမိပါသလား။ကျွန်မတို့ အပယ်ကိုကြောက်ခဲ့ရင်ပေါ့—–
ယုံကြည်လို့ကိုးကွယ်ယင်ထန်းလက်တောင်အသက်ရှိတယ်လို့ထင်ရပါတယ် မယုံကြည်တဲ့သူတွေနဲ့တော့မဆိုင်ပါ ဒါကြောင့်လဲယုံကြည်သူတွေအတွက်တော့နတ်တွေရဲ့စောင်မမှု့ ဖျက်ဆီမှု့ကိုခံစားနေကြရတာပါ…ဗုဒ္ဓကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာအားကိုးရာလို့သွန်သင်ခဲ့တာ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားအားထုတ်ရာမှာတောင် ဗုဒ္ဓကလမ်းပြယုံတင်ပြပေးနိုင်တာပါ ကြိုးစာရမှာကကိုယ်ကို တိုင်ပါ..သဘာဝကျတဲ့တရားပဲယုံကြည်ပါတယ်…
ရိုးရာ ဆိုတာတိုင်းလက်ခံရမှာလား? ဘာမှမစဉ်းစားရတော့ဘူးလား? နေ၀န်းနီ အိမ်မှာတော့ ဘုရားဆောင်ကလွဲရင် ဘာမှမရှိဘူး..။ ဘာပုံတော်မှ မရှိဘူး…။ ဘာပွဲမှမရှိဘူး…..။ ရှင်းရှင်းပဲ မင်းကိုပြောမယ် သွားဒေါ့ ပဲ…။
အမှန်ကိုမမြင်နိုင်တဲ့လူက တော့ ကိုးကွယ်မှာဘဲ။
အဲတော့ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပပျောက်အောင် ကိုယ့်အိမ် ကိုယ့် မိသားစု ကိုယ့်အမျုိးတွေကစပြီး မကိုးကွယ်အောင် စတင်လို့ တားဆီးပေတော့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပေတော့
သူများတွေကိုးကွယ်လား မကိုးကွယ်ဘူးလားလဲ အလုပ်ရှုပ်ခံပြီးလိုက်မကြည့်တော့ဘူး။
သူနဲ့သူ ကိုယ်နဲ့ကိုယ် မတူနိုင်ဘူး။
ဒါပေမယ့် ကိုယ့် အနီးရှိတဲ့ကိုယ်ထက်ငယ်သူတွေကိုတော့ ရှင်းပြထားတယ်။
အားလုံးတော့ လိုက်မပြောနိုင်ဘူး မောဒယ်
နတ်ကော၊ဗေဒင်ရော၊ဘိုးတော်ရော ဘာတစ်ခုမှမယုံကြည်ဘူး။ ခပ်ညံ့ညံ့လူလိမ်တွေလုပ်စားတာကို ခပ်တိမ်တိမ်အတွေးနဲ့ သူတွေက ယုံပေးတာပါဘဲ။ ကျွန်တော်သာ သားသမီးရတနာထဲက သားယောက်ျားလေး ရခဲ့ရင် မိဘတွေလက်ထက်က ရှင်ပြုရင်နတ်ပြရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကို ရိုက်ချိုးပလိုက်မယ်။
သားယောက်ျားလေး ရခဲ့ရင် မိဘတွေက(ကလေးဆန္ဒမပါပဲ) ရှင်ပြုပေးရတယ် ဆိုတဲ့ဓလေ့ပါရိုက်ချိုးနိုင်ရင်.. ပိုတောင်ကောင်းတာပေါ့ကွယ်…။
ရဟန်း..၊ကိုရင်ဝတ်တယ်ဆိုတာ.. အပျင်းပြေ..တာဝန်အရ လုပ်နေကြရတာမှမဟုတ်တာ..။
တပါတ်.. ၁၀ရက်.. စသဖြင့် ကိုရင်ဝတ်ရမဲ့ရက်..ကြိုတင်ကန့်သတ်ပြီး လုပ်ကြတာ.. အဆင်မပြေဘူးထင်မိတယ်.။
စိတ်ထဲက.. စေတနာမပါပဲ.. မိဘကအတင်းလုပ်ခိုင်းလို့လုပ်တာဟာ..ကလေး..နုငယ်သူတို့ရဲ့.. အညွှန့်ကို..ချိုးပစ်တာတမျိုးပဲ..။
ယူအက်စ်မှာတော့..ဒီမှာမွေးတဲ့ မြန်မာကလေးတွေကို… ဘုန်းကြီးကျောင်းသွား.. ကိုရင်အတင်းဝတ်ခိုင်းတဲ့ အခါ.. မိဘအလိုအရ.. ၀တ်ပေးလိုက်ပေမဲ့.. ကြီးလာတဲ့အခါ.. သူတို့ရဲ့ ၉၀ရာခိုင်နှုန်းက( ၁၀၀ လိုတောင် ပြောရမလို.. သိသလောက်အားလုံးက ဗုဒ္ဓဘာသာကို စွန့်လိုက်ကြလို့) ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပြန်မဖြစ်ဖူး..။
လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့.. လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာနေရတဲ့အခါ.. အဲဒီကလေးတွေက.. အသက်ကြီးလာရင်.. (ရင့်ကျက်လာရင်)ဘယ်လိုတွေးခေါ်စဥင်္းစားကြတယ်ဆိုတာ.. ရွာသားတွေသိစမ်းစေချင်တယ်..။
သာသနာကို.. ထွန်းကားပြန့်ပွားအောင် လုပ်ရာမှာ အနှုတ်လက္ခဏာဖက် သွားစေတာပိုများတယ်လို့..ထင်မိတယ်..။
ရိုက်ချိုးဘို့ ကြိုးစားခဲ့ကြဘူးတာပေါ့ .. သူကြီးရယ်။
ထင်ရှားတဲ့ထဲကပြောရရင် ရွှေကျင်နိကာယဂိုဏ်းလို့ခေါ်တဲ့ သံဃာဂိုဏ်းကြီးမှာ ဟိုးရှေးယခင်က သားယောက်ျားလေး ရခဲ့ရင် မိဘတွေက(ကလေးဆန္ဒမပါပဲ) ရှင်ပြုပေးရတယ် ဆိုတဲ့ဓလေ့ ကို တားမြစ်တယ်လို့ (ရွှေကျင်ဂိုဏ်း ဆရာတော်ကြီးတပါးထံမှ တိုက်ရိုက်) ကြားသိရဘူးပါတယ်။
ဒါကြောင့် မိဘက ကိုရင်ဝတ်စေချင်တဲ့သားကို ဘုန်းကြီးကျောင်းပို့ပြီး ဖိုးသူတော် အရင်ဝတ်ခိုင်းထားရတယ်။ ပြီးတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ အခြေခံတွေလဲလေ့လာ၊ ရှင်ကျင့်ဝတ်တွေလဲ နားလဲလည် အလွတ်လဲရ အောင် လေ့လာရတယ်။ သာသနာကိုကြည်ညိုတတ်ပြီဆိုမှ ၊ သာသနာတွင်းမှာ အချိုးကျအောင် နေတတ်လောက်ပြီဆိုမှ မိဘကိုခေါ်ပြီး ကိုရင်ဝတ်ပေးခွင့်ပြုတယ် …လို့ ဆိုပါတယ်။
အဲဒီအစဉ်အလာက ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးနဲ့အတူ ပျောက်သွားခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။
(ကြီးလာတဲ့အခါ…………….ဗုဒ္ဓဘာသာကို စွန့်လိုက်ကြလို့) ဆိုတာကိုလဲ မှန်ပါတယ်။
စိတ်သန်ရာ ဓလေ့ထုံတမ်းအသစ်တွေ အယူအဆသစ်တွေ စုပြုံထည့်ထားလို့ ပုံပျက်နေတဲ့ ဘာသာတခုကို လွပ်လပ်စွာ တွေးခေါ်စဉ်းစာတဲ့သူက ဘယ်လက်ခံတော့မလဲ။
မဟာဂန္ဓာရုံ ဆရာတော်ကြီးကတော့ အနာဂတ်သာသနာရေးစာအုပ်မှာ ပြောဘူးတယ်။
“…အဲဒါ သာသနာတော်ကြီး စည်ပင်ထွန်းကားတာမဟုတ်ဘူး။ သာသနာတော်ကြီး ဖူးယောင်နေတာ …”
အဲသလိုပြောတာတောင် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၇၀ ကျော်ကနော် …။
ခပ်ညံ့ညံ့လူလိမ်တွေလုပ်စားတာကို ခပ်တိမ်တိမ်အတွေးနဲ့ သူတွေက ယုံပေးတာပါဘဲ။
Dear My fellow Buddhist,
Kindly be mature,
Please consider နတ်ကိုးကွယ်မူ asaone type of religion (ဘာသာရေး)
like, Buddhist, Christian, Islam, Hinduism, etc
ဒါဆို သံဃာနဲ့ မိန်းမလျှာ ဘယ်သူ့ကို ယုံကြည်မလဲ
Some will believe ဘုရား
Some will believe နတ်
Some will believe မိန်းမလျှာ
Some will believe God
Some will believe Allah
This is their personal right ( to choose religion )
You can say Buddha is good.
But, you cannot say နတ်ကိုးကွယ်မူ is bad.
When I was not mature & young,
I frequently go & swear ( ဆဲ​ ) to နတ် in front of all နတ်ကွန်း in Kyeik Htee Yoe & Poppa ( Eg, Byat Weak, Byat Tha, Shwe Phyin Nyi Naung, their mother & even Taung Paing Pho Pho Gyi ).
At that time ( until now ), I believe I am more powerful than that နတ်.
( For example, I can swear & kick their နတ်ကွန်း, but they cannot kick me back. So, in particular, I am more powerful than နတ် )
But, now, I will not do it again
Now, I understand, this is one type of discrimination ( to religion ).
Everybody have their own right to believe & to follow their own religion.
ဆရာတော်ကြီးတွေဆုံးမသလိုပဲ ကလေးတွေရဲ့နှလုံးသားမှာဘုရားတည်ပေးဖို့လိုတယ်..မြေပြင်ပေါ်က ဘုရားတွေက နှစ်ကာလကြာရင်ရာသီဥတုဒဏ်ကြောင့် ပြိုပျက်သွားနိုင်ပေမယ့် ရင်ထဲကဘုရားကတော့ အသက်ရှင်နေသရွေ့ တည်နေနိုင်တယ်။ လူကြီးတွေကိုယ်တိုင်က ဗုဒ္ဓဘာသာကို မိရိုးဖလာမဟုတ်ဘဲ တစ်ကယ်သက်ဝင်ယုံကြည်ရင် ဘုရားသာသနာအစဉ်သဖြင့် တည်တံ့မှာပါ…
ဝေမာနိကပြိတ္တာနွယ်က စပြီး စတုမဟာ၇ာဇ်နတ်မျိုးမှာ ပါဝင်ပါတယ်။
နတ်ဒေ၀တာများကိုးကွယ်မှု မှန်သည်မှားသည် ဆိုသည်ထက်…
တစ်ပါးသူ၏ ယုံကြည်မှု တစ်ခုခုအပေါ် မိမိစိတ်ထဲ မကျေမန-ပ်ဒေါသဖြစ်နေခြင်း (အကုသိုလ်ဖြစ်နေခြင်း) က အရင်ဆုံး မိမိအတွက် အရှုံးဖြစ်ပါသည်။
TO/ Foreign resident
Please read my words carefully.You have to know what i mean, what my point, that (u said above) is not what i meant. I never and ever make an argument who must BELIEVE IN what religion. That is one’s own opinion and choice, not mine. I don’t have any suspicion and doubt everybody have rights to do so coz i’malaw abiding democracy.Much people (human beings ) trick and cheat the other persons by using different ways in favor of their interest. THAT IS MY POINT. Honestly i say, as for me, i don’t BELIEVE IN god (not GOD) and deity, but not celestial beings. Do u understand what i mean?
By the way, let me ask u one thing . You said u swore in front of fane, if so, u’ve been believing all the time of ur life upon them, even u r young, don’t u?
But i never abuse god and deity coz i have just distrust them.
I do apologize for you’ve wrongly understood to my words or in favor of my poor writing.
Dear Min Thakhin,
when I was young & immature,
I used to swore ( ဆဲ​ရေးခြင်း ) those deities ( နတ် ) &
I kicked & sometime even urinated to their fane ( နတ်ကွန်း ).
But, this is the past ( what I didalot of mistakes ).
Now, I realized that,
It is one type of discrimination to those who believe in နတ်.
So, even I don’t believe in နတ် ( from childhood, to now ),
I will not do those discriminations again.
This isafair go & compassion/sympathy.
What will you feel, If Christian or Muslim people said to our Buddhist people,
” ခပ်ညံ့ညံ့လူလိမ် (Buddhist Monk) တွေလုပ်စားတာကို ခပ်တိမ်တိမ်အတွေးနဲ့ သူ (Buddhist) တွေက ယုံပေးတာပါဘဲ ” ( just example naw )
How will you feel ???
Don’t you think, it is too harsh ???
Then, we ( Buddhist ) should not say nor do it to the believer of နတ်.
In fact, I didn’t comment to you alone, I did it for all villagers.
Anyway, thanks for your reply &
Sorry for my poorness of English &
being unable to write in Myanmar font.
Because of that, some of my comment may deviate from my real meanings.
ရောသမမွှေလာခဲ့ကြရင်.. ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာမဟုတ်တော့ပဲ.. အများနဲ့သက်ဆိုင်သွားပြီး.. ဆိုင်ရာသူတွေက.. ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ပြောခွင့်ရှိလာတယ်လို့.. ထင်မိတယ်..။
ပြောရအုံးမယ်….Buddhism ဟာ ဘာသာရေး မဟုတ်ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓက church ကိုမထူထောင်ခဲ့ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓအယူဝါဒကအကျင့်အကြံပါဘဲ။ ပင်ပမ်းဆင်းရဲချင်းကြီးလှတဲ့ ခန္ဓာဝန်ကိုထမ်းရတဲ့ ဒုက္ခကလွတ်ရာဖြစ်တဲ့ နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကြောင်းကျင့်တဲ့အကျင့်သာလျင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ကိုးကွယ်ခြင်းကိုတားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုသူအများစုကတော့၊ ဘာသာလို့ယူဆသတ်မှတ်ကြပေမဲ့ တကယ်လိုက်နာတာကတော့၊ မိရိုးဖလာအယူဝါဒသာလျင်ဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျား။
ဘာတဲ့..မြန်မာတွေရဲ့ အမျိုးသား ဆောင်ပုဒ်(ခေါ်ရမလား)က…
အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ တဲ့..။
အဲဒီထဲကျတော့.. ဘာသာက..ဘာသာစကားကိုပြောတာလို့ သိထားပါတယ်.။
မြန်မာဘာသာ..စာ..စကားက.. ဟိုကယူ ဒီကဆွဲ..ပါဌိကိုဖျက်.. အင်္ဂလိပ်လူထွက်..။ တရုတ်လွှမ်းမိုး..ကုလားအားကိုး..ယိုးဒယားအကနဲ့.. အင်မတန်ကို..
လူ့ဘဝဆိုတာ ဘာမှမသိခင် ကုန်ဆုံးသွားတတ်တယ်။
ဘဝရဲ့ အဓိပ္ပါယ် ကို အချိန် နဲနဲလောက် ပေးပြီး
လေ့လာရင်း ငြင်းခုံရင်း ဆွေးနွေးရင်း အဖြေမရခင်..
လူ့ဘဝကိုစွန့်သွားရမယ်ဆိုရင် အရင်းရှုံး ပါလိမ့်မယ်။
အဖြေမှန်ကို ရှာဖွေတွေ့နိုင် ကြပါစေ။
နတ်ကိုယုံလည်းမယုံဘူး၊ swear ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ နတ်ကိုလည်းပြောထားသေးတယ်ဆိုတော့။သေချာပါတယ် တစ်ခုခုတော့ မှားနေပါပြီလေ။ swear လို့ နတ်ကိုပြောမှတော့ အဲဒီနတ်ကိုရှိတယ်ထင်လို့ကျိန်ဆဲတာမျိုးဖြစ်သွားပါပြီ။ abuse ဆိုရင်တော့ ငါနဲ့ နှိုင်းပြီး ဆဲတာမည်ပေမည်။ ဒီလိုဆဲရေးလိုက်လို့မိမိမကျေနပ်မှုကို ရိုင်းပျမှုသက်သက်ဖြစ်တာမည်လို့မိမိဆဲရေးလိုက်သည့်အပေါ် ယုံကြည်မှုမျိုးမသက်ရောက်ပေ။swear သည် ကျိန်ဆဲလိုက်သည့် အပေါ်မှာရော ကျိန်ဆိုသည့် အရာ (ကျိန်စာအစရှိသည်) ကိုယုံကြည်မှုမျိုးသက်ရောက်နေပေသည်။အရာတစ်ခုသည် မတည်ရှိဟု ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာသတ်မှတ် (ယုံကြည်)လျှင် ထိုအရာအား ဆဲရေးသက်သက်ဖြင့်သာ မိမိခံစားချက်ကိုဖော်ပြနိုင်ပေသည်။
ကျွန်တော် ကတော့ မဆဲဘူး။ စမြင်ဘူးကတည်းက (ဒါကြီးဘာကြီးလဲ၊ ဒါကြီးဘာကြီးလဲ လို့ ပဲ) စိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်။ ကိုယ်မှ ဒါကိုသေသေချာချာမသိတာကို ဘာမှဆဲရေးစရာအကြောင်းမရှိဘူး။
အိုကေ ပြောစရာရှိတာတစ်ခုတော့ ပြောရဦးမယ်။ ပြောတော့သာ ဗုဒ္ဒဘာသာ၊ပြီးတော့ နတ်တွေ ဘိုးတော်တွေလည်းကိုးကွယ်သေးတယ်။ အင်း သေသေချာချာစဉ်းစားကြည့်ကြပါအုံး။
ဗုဒ္ဒဘာသာ လမ်းစဉ်နဲ့ပြဒါးတစ်လမ်း၊သံတစ်လမ်း ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးပဲ (ပြောရင်ပြောလို့ ပြီးမှာမဟုတ်ဘူး)။ အဲဒါဆို သူကဘာကိုသက်ဝင်ယုံကြည်နေတာလဲလို့ မေးလိုက်ချင်ပါတယ်။ ကောင်းတာတွေရွေးယူတယ်လို့ မပြောနဲ့ နော်။ ကိုကြီးကျော် အရက်သောက်ပြီး ကြက်အစိမ်းစားတာနဲ့ တင် အဲဒီစကားပြောမယ်ဆို ဒီမှာတင်ရပ်။
ကျွန်တော့်ဆိုလိုရင်းကိုသေသေချာချာဖတ်ပါ။ လုပ်စားတဲ့သူ (လုပ်စားတယ်လို့ ပြောထားတယ်နော်၊ဒါကိုမှနားမလည်ရင်တော့ မရှင်းပြတတ်တော့ဘူး၊ရှင်းပြတဲ့သူညံ့တယ်လို့ ပဲသတ်မှတ်လိုက်ပါတော့) မှန်သမျှကိုဆိုလိုတယ် (ဘယ်ဘာသာရယ်လို့ မပြောဘူး၊ ရှင်းပါတယ်နော်)
ဥပမာ ပြောပြမယ် ။
ရွာတစ်ရွာမှာ ယောက်ျားသည် မရှုနိုင်မကယ်နိုင်ဖြစ်လို့ ဇနီးသည်က ဘုန်းကြီးသွားပင့်တယ်။ ဘုန်းကြီးက လိုက်လာပြီး ကြည့်လိုက်တော့ရိုးရိုးတန်းတန်းနာမကျန်းဖြစ်တာပဲဆိုတာသိသွားတယ်၊ အဲဒါကိုဇနီးသည်ကလား မယုံဘဲ ၊ သူကအပမှီတယ်ပေါ့၊ ဘုန်းကြီးကဘယ်လိုပြောပြောမရဘူး။
အဲဒါနဲ့ ဇနီးသည် စိတ်ချလက်ချဖြစ်သွားအောင် မန်းမှုတ်ပေးဘာပေး၊ပရိတ်ရွတ် လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဆေးပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီတော့မှ ဇနီးသည်ဖြစ်သူကစိတ်ချသွားတယ်။ယောက်ျားဖြစ်သူနေကောင်းသွားရော ဇနီးဖြစ်သူကရွာထဲမှာလိုက်ပြောတယ် ဘုန်းကြီးအရမ်းစွမ်းတယ်ပေါ့။
အဲဒါနဲ့ နောက်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးက အကြံရပြီး သူသည် မကောင်းဆိုးရွား၊မကောင်းတာ များကိုနှိမ်နှင်းနိုင်သည်ဆိုပြီး အသံကောင်းလုပ်ကာ နာမကျန်း၊ ဒုတ်ခရောက်သူများအပေါ်
ကဲ ဒုတိယဘုန်းကြီးနဲ့ ပထမဘုန်းကြီး ဘယ်ဘုန်းကြီးလုပ်စားပါသလဲ။(ဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုမျိုးတွေရှိမှာပဲ)
အိုကေ ယုံတာနဲ့သက်ဝင်ယုံကြည်တာနဲ့အများကြီးကွာခြားပါတယ်လေ။ဒါလေးကို အရင်သေသေချာချာသိအောင်လုပ်ပါဦး။ သက်ဝင်ယုံကြည်လာရင် အဲဒီအတွက် ဘာမဆိုပေးဆပ်ဖို့ အသင့်ဖြစ်နေကြပါတယ်။ ယုံတဲ့အရာအပေါ် ဆင်ခြင်တုံတရားမရ၊ှိဘဲ ရူးရူးမိုက်မိုက်နဲ့ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်လျှောက်လုပ်တာနဲ့ လဲ မတူသေးပြန်ပါဘူး။ သက်ဝင်ယုံကြည်တယ်ဆိုတာ အဲဒီအရာအပေါ်သေသေချာချာလေ့လာပြီး စမ်းစစ်ပြီးမှ၊အဲဒီအရာအပေါ် ခရေစေ့တွင်းကျသိပြီးမှ ကိုယ်ကသတ်မှတ်သင့်တဲ့အရာပါ။
(Kindly be mature,) to WHAT?
Mature, mature, mature . . . . it has nothing to do with this.It just depends on reasonable thinking, critical thinking, IQ, EQ ,ect..